बिहिबार, वैशाख २३, २०७८ १०:०४:२४ युनिकोड
धादिङ,११ श्रावण ।धादिङ जिल्लामा महिला हिसांको अवस्था,समस्या,समाधान तथा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा घटेका लैङगिक घट्नाहरु लगाएतका बिषयमा महिला अधिकारकर्मी तथा सहयात्रि समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक राधिका सापकोटासँग धादिङ सञ्चार प्रा.ली.ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
१.लकडाउनको समय कसरी विताउनु भयो ?
यो समयमा पनि हामीले दुई वटा काम गर्यौ । दुई जना महिलाहरुको न्यायको पुर्नस्थापनाको लागि हामीले काम गर्यौ । लकडाउनको अवधिमा पनि पुर्नस्थापना गृह सरकारले भत्काएको थियो त्यो अहिले निर्माणको चरणमा छौँ । धेरै जसो निर्माणको कार्यमा पनि हामीले भुमिका निभायौँ ।
२.अहिले कोभिड–१९ को महामारी फैलिएको छ,यसमा महिलाहरु कतिको जोखिममा हुनुहुन्छ ?
जहिले पनि विपदको बेलामा महिलाहरु माथि हिंसा सबै भन्दा बढि हुन्छ । यो कोभिड १९ को बेलामा पनि लगभग त्यस्तै पनि भयो । तर कस्तो भन्दा अरु विपदको बेलामा महिलाहरु बाहिर निस्किएर आउन सक्ने स्थिती हुन्छ । तर यो बन्दाबन्दी भएको कारणले पनि हिंसा भएर पनि बाहिर आउन नस्कने कुरा धेरै भयो । जस्तै जबरजस्ती करणीका घट्नाहरु आयो ।
१९ जना महिलाहरुले मलाई यस्तो यस्तो घट्ना भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ । त्यहाँ न उहाँहरु आउन सक्नुहुन्छ,न प्रहरी नै त्यहाँ जान सक्छ । यो लकडाउनको अवधिमा झनै यौन जन्य हिंसाका घट्नाहरु बढेको र त्यसमाथि पनि आफन्तजन बाट भएको बढि छन् । बन्दाबन्दीको अवस्थामा परिवारका सबै सदस्यसँगै हुने भएकोले पनि आफ्नै परिवार बाट यौन जन्य हिंसा भईरहेको छ ।
३.भनेपछि महिलाहरु आफ्नै परिवार बाट पनि सुरक्षित नभएकै हुन् ?
हामीलाई डर लाग्यो भने सबैभन्दा पहिला हामी आफ्नो घर आउछौं किनकि त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो विचार छ । तर महिलाहरुको लागि त्यही घरनै असुरक्षित भएको छ ।
परिवारमा हामीले बच्चाहरुलाई नचिनेको मान्छेसँग नबोल सुरक्षित बस है भनिरहेका हुन्छौं । तर हामीले तथ्याङ हेर्ने हो भने नचिनेको मान्छे सँग डर छैन । ती आफ्नाहरु बाटनै सबै भन्दा बढि हिंसाका घट्नाहरु भईरहेका छन् । त्यसैले जहिले पनि हामी भन्छौं,महिलाहरुको लागि त्यो घरनै सबै भन्दा जोखिम बन्दै गएको छ ।
४.पहिला पनि घट्ना घटेको थियो,बाहिर आउदैन थियो । अब अहिले मान्छेहरु अलि बुझ्ने भए यो हिसावले पनि घट्नाहरु बढेको हो ?
दुई वटै कुरा हो जस्तो लाग्छ । पहिला यस्ता खालका घट्नाहरु सुनिराखेका हुन्थ्यौ । त्यसलाई त्यति खेर मिडियाहरुले रिपोर्टिङ गर्ने कुरा, प्रहरी सम्म आउने कुरा अथवा बाहिर आउने कुरा एक्दमै कम थियो । तर अहिले अर्वाडनेश पनि भयो मिडियाले पनि त्यत्तिकै भुमिका खेलिरहेको छ । प्रहरीको सक्रियता पहिलाको भन्दा धेरै छ । राज्यनै के भनेर लागिरहेको छ भने महिलाहरु माथि हुने हिंसाको घट्नालाई बाहिर ल्याउनुपर्छ है हामीले रोक्नुपर्छ यदि घट्ना भयो भने न्यायको लागि जानुपर्छ है भनेर लागिरहेको छ ।
त्यसैले गर्दा पनि महिलाहरु आउनको निम्ती सहयोग भएको छ । बाहिर आउने वातावरण निर्माण भएको छ । अझै पनि घट्नाहरु जति भईरहेको छ, त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै बाहिर आएको हो भन्छन् । अझै ५० प्रतिशत घट्नाहरु भित्रै छन् बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । त्यो खालको अवस्था छ । तर जति आएका छन् त्यसलाई हेर्दा हिजो पनि थियो तर आज रिपोर्टिङको कुरा बढेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।
५.धादिङमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लैङगिक घट्नाहरुलाई हेर्दा कस्तो प्रकृतिको पाउनु भएको छ ?
एउटा रिपोर्ट हामीले अस्तिमात्रै सार्वजनिक गर्यौ । हामीले यो वर्षमा ६८ वटा घट्नाहरु आएका रहेछन् । सहयात्री समाज नेपालमा पुर्नस्थापनामा आएका घट्नाहरु हुन् । उहाँहरुको घट्नालाई हेर्दा सबै भन्दा बढि स्रोत साधन बाट वञ्चित भएका घट्नाहरु २४ वटा पायौँ । जस्तै खान लाउन नदिने, नागरिकता नदिने, विवाह दर्ता नबनाईदिने, घर बाट निकाला गर्ने यस्ता घट्नाहरुलाई स्रोत साधन बाट वञ्चित घट्ना भन्ने गरिन्छ ।
दोस्रो भावनात्मक रुपमा दुव्र्यवहार भएका अरुसँग लागेको आरोप लगाउने, बोक्सीको आरोप लगाउने यस्तो खालका घट्नाहरु पनि देखियो भने अर्को यौन जन्य हिंसाहरु बलात्कारको घट्ना मध्यमा पनि बालबालिकाहरु माथि भईरहेको छ । उनीहरुले आफन्त बाट भएकोले गर्दा पनि भन्न नसक्ने त्यसको कारणले गर्दा पनि बच्चा जन्माउन तयार भएर बसिरहेको छ । हामीले त्यस्तो केषहरु हेरिरहेका छौँ ।
६.वास्तवमा महिला माथि घट्ना किने घट्ने रहेछ तपाईको अनुभवले के बताउछ ?
एउटा हाम्रो सामाजिक संरचना हिजो देखि कस्तो हुदँै आयो भन्दा अहिले पनि राज्यकै नितिलाई हेर्दा नागरिकलाई दुई वटा नागरिकको रुपमा लिईराखेको छ राज्यले । एउटा महिला नागरिक र एउटा पुरुष नागरिक । हामी बराबरको नागरिक होईनाँै,बराबरको हैसियत राख्दैनौं । मैले यो देशको नागरिक हो भनेर परिचय लिनको लागि कि मेरो बुबालाई राजी बनाउन पर्छ कि मेरो श्रीमानलाई खुशि बनाउनुपर्छ ।
अहिले पनि धेरै महिलाहरु हुनुहुन्छ जो नागरिकता लिनको लागि आफ्नो श्रीमानले नबनाईदिएको कारणले गर्दा मतदान गर्ने अधिकार बाट वञ्चित भईरहनु भएको छ । राज्यलेनै महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने एउटा अझै पनि व्यवहार छन्,यो पनि एउटा कारण हो । दोस्रो कुरा के हो भन्दा हाम्रो सामाजिक संरचना र सोच । हामी हिजो देखि नै महिलाहरुलाई यौनतृष्णा मेटाउने एउटा औजार मात्रै हो जस्तो । बच्चा जन्माउने, घरधन्दा गर्ने मात्रै हो भन्ने कुरा आम सोचमा भयो । गाउँको मान्छेले आफ्नै परिवारको सदस्यले बलात्कार गर्दा सजाए दिनुपर्छ भन्दैन कि उल्टै गर्भपतन गराई दिन भन्छन् । त्यो एउटा बच्चा माथि भएको बलात्कारको घट्ना जुन छ त्यसले पीडा हुदैन किनकि उ महिला हो । यो खालको एउटा सोच छ यो पनि एउटा कारण हो ।
अर्को कुरा महिलाहरुलाई अहिले पनि आर्थिक रुपमा हैसियत दिएको छैन । सम्पती महिलाको नाममा छैन । न उनीहरु सँग माईतीमा हुँदा सम्पती हुन्छ न उनीहरु सँग घरमा आएपछि सम्पती हुन्छ । उनले सम्पती पाउनको लागि कति वर्ष सम्म मुद्धा लड्नुपर्छ । उसको केहि आम्दानी गर्ने स्रोत नभए पछि उसले आफ्नो श्रीमान सँग आश्रीत हुनुपर्छ । परिवारको सदस्यसँग आश्रीत भएपछि उसलाई जे भने पनि मान्नुपर्छ अथवा म बाहिर निस्किनुपर्छ भन्न सकिरहेका छैनन् जसको कारणले उनीहरु आफुपनि हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् ।
यदि मैले प्रतिकार गरे भने घरबाट निकालिन्छु जसको कारणले म कहाँ जानी भोली दुई वर्ष पछि त मुद्धा जितौला रे तर दुई वर्ष सम्म म कहाँ जाने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कहाँ छ,माईतीमा पनि दाजु भाईलेबस्न दिने छैनन त्यसले गर्दा पनि आफु माथि भएको हिंसा स्वीकार गरेर बस्छन् ।
तर जसले हिंसा गरिरहेको छ,उसले पनि बुझेको छ यो मान्छे मैले हिंसा गर्दा जाने ठाउँ छैन भनेर पनि हिंसा गरिरहेको हुन्छ । दोस्रो अंशको कुरा छ । जब सम्म म सँग सम्पती छ भने म बोल्न सक्छु । म त्यसको प्रतिकार गर्न सक्छु अथवा म बाहिर निस्किन सक्छु यी दुईवटा कुरा नहुनु पनि मेन कुरा हो । महिला आर्थिक रुपमा सशक्त हुन नसक्नु एउटा हिंसाको कारण हो जस्तो लाग्छ ।
७.अझै पनि मान्छेहरु महिलाको चित्र हेरेर चरित्र गर्ने, विभिन्न टिका टिप्पणी गर्ने र बुझेकै मान्छेले सामाजिक संजालमा लेख्नु÷भन्नु हेर्नुलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
दुई वटा कुरा छ । बरु नबुझेका मानिसमा अलि फरक छ । जस्तै गाउँको एउटा निम्न वर्गको मान्छेलाई हेर्नुहुन्छ भने विहान उठेपछि श्रीमान श्रीमति मिलेर काम गर्छन् । जब तपाई अलि माथि अलि बुझेका मानिसहरुमा आउनुहुन्छ त्यहाँ देखि हुन्छ हिंसा । तपाईले भन्नु भएको कुरा मैले पनि हेरे । एउटा फोटो ईडिट गरेको भन्ने छ । नभए पनि महिलाले त्यही लुगा लगाएको रहेछ पुरुषले लगाएको कुरामा कहिले प्रश्न उठेको छ ।
मेरो शरिरमा छाती छ मेरो यो नङ लामो छ,तपाईको आफ्नो शरीर छ त्यो भन्दा बाहेकको शरीरको कुनै अंग फरक छ । मेरो शरीर देखाउदा महाभारत हुने पुरुषले शरीर देखाउदा किन केहि नहुने । यसले मान्छेको सोचाईको धरातल देखियो नि । तिमीले यस्तो लगाएको कारणले गर्दा तिमी माथि हिंसा भएको हो भनेर प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छौं ।
बालिकाहरुमा सबै भन्दा बढि बलात्कार भएको छ । बालिकाहरु नाङगै हिडेका कारणले उत्तेजित भएर बलात्कार गरको हो त । साँचै हाप पाईन्ट लगाएर हिड्ने महिलाहरु बलात्कारमा परेका छन् त । तथ्यांकमा त बोल्दै नि त । तथ्यांकले के बोल्छ भने पुरै लुगा लगाएर हिड्ने महिलाहरु पनि त बलात्कृत भएका छन् नि त । यो चाँही के हो भन्दा दृष्टिकोण कसरी नियन्त्रणमा राख्ने त ।
जब समाजले महिला यस्तो हुनुपर्छ भनेर दायरा कोरिदिएका छन् नि त्यो दायरा बाट मान्छे बाहिर निस्किन खोज्छ त्यसपछि सुरु हुन्छ । त्यस्तो सोच सबै भन्दा बढि बुझ्ने र धनी मान्छेहरु सँग छ । उनीहरु किन डराईरहेका छन् भने महिलाहरु प्रतिस्पर्धामा नआउन् भनेर डराई रहेका छन् । जुन वुद्धिजिवी भन्ने जुन छन् तिनीहरुले महिलाहरु माथि पटक पटक हरेक कुरालाई लिएर विषय वस्तु बनाईरहेका छन् ।
यो कुराले के बुझ्न सकिन्छ भने महिला माथि हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि धेरै पछाडी छ । महिलाहरु पछाडी पार्ने एउटा मात्रै औजार महिलाको चरित्र हो । चरित्र नाप्ने मेसिन के हो । हामी किन आहार बनाईरहेका छौं त । मैले खाने खाना, मैले लगाएको लुगा र मैले खाएको जागिरसँग मेरो चरित्र जोडिईरहेको हुन्छ । जो बाहिर निस्किएका महिलाहरु छन् त्यसलाई चरित्र हत्या गर्ने औजार बोकेका हुन्छन् ।
८.महिलाले काम गर्न सक्दैन,महिलाको आट हुन्न भनेर विभिन्न बहाना बनाएर त्यहाँ बाट पछी हटाउने परम्परा आजको नेतृत्वमा पनि छ र समाजमा देखिएको पनि त्यही हो ?
जहिले पनि राजनितिक परिर्वतनको कुरा गर्दा महिलाहरुले ठुलो भुमिका खेलेका छन् । १० वर्षे जनयुद्धमा पनि ४० प्रतिशत महिलाहरु सेना थिए । तर आज पनि फर्केर हेर्ने हो भने महिलाहरु राजनितिमा टिकिरहनु भएको छ । हरेक राजनितिक दलमा हेर्ने हो भने २०६२÷ ०६३ को आन्दोलनमा धेरै महिलाहरु काखमा बच्चा च्यापेर आनदोलनमा गए ।
राजनितिक परिवर्तनले हाम्रो हैसियतमा परिवर्तन ल्याउछ, महिला र पुरुषको एउटा विभेद छ,त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नको लागि सहयोग गर्छ भन्ने सोच महिलाहरु सँग थियो । तर जब राजनितिक परिवर्तन हुन्छ नी त्यो सबै विर्सिन्छ र त्यसपछि सत्तामा आउनको लागि महिला पुरुष बराबर हौँ जस्तो कुरा गर्छन् ।
राज्यले अहिले पनि किन दुई वटा नागरिकको रुपमा हेरिरहेको छ भन्दा निर्णय गर्ने स्तरमा महिलाहरुको संख्या नहुनुनै हो । किनकि अहिले पनि निर्णय गर्ने बेलामा महिलाहरुको पक्षमा निर्णय गरिदैन । महिलाहरुको आवाजलाई थिचिन्छ । ५२ प्रतिशत भन्दा बढि महिलाहरुको जनसंख्या छ निर्णायक तहमा हेर्ने हो भने अहिले ३३ प्रतिशत पनि महिलाहरुको संख्या छैन । भनेपछि हाम्रो बाँकी रहेको ५२ प्रतिशत संख्या त अहिले पुरुषहरुले ओगटेको हो नि त ।
हामीले हाम्रो ठाउँ छाडिदेउ भन्या हो न कि तपाईहरुको ठाउँ छोडिदिनु भएको होईन । हिजो सम्म तपाईहरुले हाम्रो ठाउँ ओगट्नु भयो तर त्यो ठाउँ अब छाडिदिन पर्छ भनेको हो । तर यो के सोचिरहनु भएको छ भने महिलाहरुलाई दिने हो भन्नु भएको छ । अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो स्थान खाली गर हाम्रो ठाउँमा आज सम्म तपाईहरु हुनुहुन्छ । तर पुरुषहरु र नेतृत्वले के बुझिरहेका छन् भने महिलाहरुलाई दिने वित्तिकै पुरुषको ठाउँ खोसिन्छ । यहि नेतृृत्वमा यो एउटा महिलाहरुको पक्षमा बोल्न नसक्नुको कारण यो बुझाई हो जस्तो लाग्छ ।
९.महिला आधा आकाश हो भन्ने गरिन्छ, एउटा श्रीमानको पछाडी सफल हुनुमा महिलाको हात हुन्छ भनेर मिठामिठा उखान टुक्का सुनिन्छ, तर व्यवहारमा हेर्दा साच्चै घरकै परिवारले पनि त महिला सदस्य खुशि भएको देख्न चाहदैन रहेछ त ?
हामीले अलिहे सम्म के भनिरहेका छौँ भने महिला माथि हुने हिंसाको कारण पुरुष हो भनेर भन्ने बुझाई छ । तर हामीले के भन्छौं भने यो नकि पुरुष विरुद्धको आन्दोलन पनि होईन । हामीले अहिले के गर्न खोजिररहेका छौँ भने पुरुषले जुन पितृसत्ताको कुरा गरिरहदा महिला र पुरुषमानै असर गरिरहेको छ ।
त्यस महिलामा मात्रै होईन पुरुष पनि पिडामा रहेका छन् । तर हामी के भनिरहेका छौा कि पुरुष बाट महिला पिडित भयो भनि रहेका छौं तर पुरुष बाट महिला पिडित भएको पनि होईन । मात्रै के हो भन्दा त्यहाँ ह्जारौं वर्ष देखि पितृसत्ताले महिला र पुरुषको बीचमा एउटा विभेद खडा गरेको छ । त्यो विभेदले महिलाहरुलाई एउटा खालको पिडामा पारिरहेको छ । पुरुषलाई पिडक बनाउनको लागि उत्प्रेरित बनाईरहेको छ । त्यसैले हामीले परिवारलाई नै राम्रो बनाउने हो भने पितृसत्तात्मक सोचलाई नै परिवर्तन गर्नु जरुरत छ ।
१०.महिलाका मात्रै कुरा होईन पुरुका पनि कुरा आउन पर्यो अब भन्ने हिसावले वास्तवमा पुरुष पनि समस्यामा परेका छैनन् भन्न सकिन्न परेका पनि छन् होला तर तथ्य र तथ्यांकले के भन्छ ?
हामीले अहिले सम्म बोलेकै तथ्यको आधारमा हो । हुन सक्छ,होला पुरुष पनि पिडामा होला तर खै त तथ्यांकमा आएको । पुरुष त बोल्न सक्छ नि त उसँग त पावर छ उ बोल्न सक्दा पनि उसले म माथि हिंसा भयो भनेर बोलिराखेको छैन नि त । अहिले पनि ९९ प्रतिशत महिलाहरु हिंसा बाट पिडित छन् । भनेपछि हिंसा बाट पिडित महिलाहरु छन् भनेर तथ्यांक आईरहेको छ भने त हामीले कसरी पुरुष पिडित छ भन्ने त । अहिले आत्महत्याको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने महिलाहरुको भन्दा पुरुषको संख्या बढि छ । हाम्रो बुझाई के छ भन्दा महिलाहरुको कारण पुरुषले गर्दा पुरुष हिंसामा छ भनिराखेका छौँ ।
कारण के हो भन्दा पितृसत्ता हो । छोरालाई सानै देखि श्रीमती, आमा बाउ पाल्नुपर्छ भन्ने गरेको हुन्छन् र छोरीलाई क्षमतानै भएपनि श्रीमानले तिमिलाई पाल्ने हो भनेर परिवार बाट सिकाईयो । अहिले पुरुषहरुमा फ्रस्टेशन किन छ भन्दा मेरो परिवारलाई अरुको जस्तो बनाउन सकिन ।
महिलाहरुलाई देखासिखिको कारण श्रीमानलाई टचर दिईरहेको छ । त्यो जिम्मेवारी पितृसत्ताले पुरुषलाई दियो । हाम्रो भनाई के हो भन्दा असमानताले विभेदले महिलाहरुलाई कमजोर बनाईदियो जसको समस्या पुरुषहरुलाई पनि छ । जसको कारणले गर्दा आर्थिक भार पुरुषमा पर्यो यो कारणले गर्दा समस्या आएको छ । त्यसको जिम्मेवार महिला हो त होईन नि । यो सबै समाजले नै गरिरहेको छ नि । त्यसैले बराबर ठाउँमा हुनुपर्छ दुवै जना । त्यसले गर्दा हामी अस्तित्वको स्वीकार गर्छौ एक अर्कालाई र हाम्रो आन्दोलन पुरुषको विरुद्धमा होईन कि न्याय र पितृसतात्मकको पक्षमा हो ।
११.मान्छेले बुझ्दा पुरुषको विपक्षमा मात्रै काम गर्छन् भनेर हेर्छन नि ?
९९ प्रतिशत महिला हिंसाबाट प्रभावित छ भन्दा पुरुष बाट नै हिंसा भईरहेको छ । हाम्रो काम पितृसत्ताको अन्त्य गरेर समानताको सत्ता ल्याउने हाम्रो अभियान हो । हाम्रो लडाईँले महिलाई मात्रै होईन पुरुषलाई पनि फाईदा हुन्छ । यो लडाँईमा पुरुषहरु पनि बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारको कारण धेरै समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् ।
यो समाजले सकेपनि नसकेपनि परिवार तिमिले पाल्न पर्छ भनेर पुरुषलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । जुन आफ्नो श्रीमान सँग बस्नुपर्ने आवश्यक भएको समयमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था छ । पितृसतात्मक सोचले गर्दा जुन पुरुषलाई बोझ बनाईदियो । हामीले सक्र्छौं भने यही रोजगारको सिर्जना गर्ने हो भने परिवारलाई छाडेर बाहिर जानै पर्दैन ।
१२.महिलाको क्षमता वृद्धिको लागि स्थानीय तहले कत्तिको प्राथमिकतामा राखेकोे देख्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहको कुरा गर्दा विकासमा केहि परिवर्तन आएन । हिजो पनि सडक खन्ने बाटो बनाउने थियो अहिले पनि त्यहीनै छ । मैले सबै स्थानीय तहको सबै कार्यक्रममा महिलाहरुको हेरेको थिए खासमा एक दुई वटा कार्यक्रम छ । भनेपछि महिलाहरुको हिजोको सोचलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त ।
जरामा काम गर्ने गरि काम आएको छैन । त्यसले महिलाको लागि बजेट छुट्याईदिन पर्छ नत्र आलोचना आउछ भन्ने हिसावले बजेट छुट्याईएको छ । अहिले सम्म गर्ने भनेको सिप विकासको तालिम, आय आर्जनको तालिम मात्रै राखेको पाईन्छ । एउटा तालिम दिन्छ भने त्यसको उद्योग संचालन गरेर काम गर्न सक्ने वातावरण भईदिए त उसको लागि ठुलो कुरा हुन्छ नि त । हामीले के गरिरहेका छौँ भने आमुलपरिर्वतन गर्ने कुरामा भन्दा पनि महिलाहरुलाई त्यही टेवा दिने काम मात्रै भईरहेको छ। त्यसले महिलाहरुको स्थितीमा कुनै परिर्वतन आउने वाला छैन ।
१३.महिला या पुरुषको भन्दा पनि यो साझा अभियान हो दुवै पक्षले यो अभियानमा सहयोग गर्नुपर्छ ?
यो समानताको आन्दोलन हो । तर मान्छेहरुलाई मेरो ठाउँ त्यहाँ बाट खोसिन्छ कि भन्ने डर हो । अहिले सम्म राज्यको सत्ता त पुरुषहरु सँग छ नि त । पितृसत्ताको सोच राख्दा महिलाहरुलाई भन्दा पनि पुरुषहरुलाई धेरै फाईदा हुन्छ ।
१४.हिंसामा परेर बस्नु भएका व्यक्तिहरु हुन सक्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
तपाई माथि हिंसा भएको छ भने तपाई बोल्नुस् भन्छु । कसैले तपाईलाई लखेटिरहेको तपाई नरोकि दौडिनुहुन्छ भने पछाडी पटिबाट लखेटिरहेकै हुन्छ त्यसैले तपाईले पछाडी फर्केर उभिन सक्नुपर्छ । जब तपाईले प्रतिकार गर्नुहुन्छ त्यहाँ २५ प्रतिशत हिंसा रोकिन्छ । त्यसैले प्रहरीले गरेको कामहरु पनि महिलाहरुको लागि सहयोग हुनेछ ।
त्यसैले प्रहरी, स्थानीय तह यदि सहयात्री समाजमा आउनुहुन्छ भने उहाँहरुको स्थिती ठिक नहुन्जेल सम्म साथी बनेर बस्नेछौँ । तपाईले हिंसा सहेर बसिरहनु भएको छ भने बाहिर आएर आफ्नो जिन्दगीलाई नियाल्नुस् । अन्त्यमा नीलकण्ठ एफ एम परिवार सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद केहि आफ्ना कुराहरु बताउने अवसर दिनुभयो धन्यवाद ।